डा. सुनिल शर्माद्वारा बेवारिसे बृद्धलाई सडकबाट उठाएर निःशुल्क उपचार (भिडियोसहित) - SangaloKhabar
बिराटनगर। बिराटनगरको उखर्माउलो गर्मीमा तातो सडक माथिको बसाई । रोगको व्यथा र बृद्ध अवस्थाका कारण उठ्नै नसक्दाको पीडाले करिव ७२ बर्षीय बेवारिसे बृद्धको दैनिकी निकै कष्टपूर्ण थियो । कसैले दया गरेर दिए खाने, नभए तातो सडकमा भोकभोकै तड्पिन बाध्य उनको साथमा न कोहि आफन्त छन्, न त सहयोगि नै थिए ।
दयनीय अवस्था देखेर उद्धारका लागि छोरा ईशानलाई साथमा लिएर पुगेका उनले बेवारिसे बृद्धलाई उद्धार गरी उपचारका लागि नोबेल अस्पताल ल्याए । छाती तथा फोक्सो सम्बन्धि समस्याले ग्रसित बृद्धलाई डा.शर्माले निःशुल्क औषधि उपचार मात्र हैन खाना, खाजासहित कुरुवाको व्यवस्था पनि मिलाईदिएका छन् ।
नोबेल अस्पतालका छाती तथा फोक्सो रोग बिशेषज्ञ डा.रामहरी घिमिरेको निगरानीमा उनको उपचार भईरहेको छ । उपचारका क्रममा बृद्धको स्वास्थ्य अवस्था सुध्रिदै गएको डा. घिमिरेले बताए । ‘सुरुमा ल्याउँदा उहाँको अवस्था गंभिर थियो ।’ अहिले लगभग निको भईसक्नु भएको छ ।’ डा.घिमिरेले भने ।
सडकमा हुँँदा उभिनसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका उनी अहिले आफै हिडडुल गर्न सक्ने भएका छन् । पहिले फोहोरका कारण दुर्गन्धित अवस्थामा रहेका उनलाई सरसफाई गरी नयाँ लुगा लगाएर चिटिक्क पारिएको छ । प्रष्टसँग नबोल्ने हुँनाले उनको पहिचान खुल्न सकेको छैन । उनी धेरै दिनदेखि सडकमा अलपत्र अवस्थामा बस्दै आएको स्थानीयबासी बताउँछन् ।
तर, कहाँबाट आए वा कसले ल्याएर छोडिदियो भन्ने खुल्न सकेको छैन । उपचार पश्चात निको भएकाले अव आफन्तको खोजी गरेर जिम्मा लगाउँने प्रयास भईरहेको अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक इन्दिरा शर्माको भनाई छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन ३०, २०७६ समय: २१:०१:२६